FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AN'NY CAVESTIE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika an'ny cavestie
Alika Cavalier Charles Spaniel / West Highland White Terrier mifangaro amboa
Molly the Cavestie (Cavalier King Charles Spaniel / Westie mix) amin'ny 10 volana— 'Tiany ny mandeha amin'ny be dia be mandeha ary mihazakazaka ho fialamboly. Feno fiainana sy faharatsiana fotsiny izy. Izy dia tsy mivadika sy be fitiavana ary feno toetrany, fifaliana toy izany ny fananana ary orinasa lehibe ho an'ny West Highland White Terrier 15-volana. '
Ny Cavestie dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Mpanjaka Charles Spaniel, Cavalier ary ny West Highland White Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Brandy the Cavestie sahabo ho 4 volana - mbola mahafatifaty be izy, liana te hahafanta-javatra ary mahafatifaty ary tia ny anadahiny Shadow ( mini Schnauzer ). '
Brandy the Westie / Cavalier Hybrid amin'ny maha-alika kely - 'Mahafatifaty toa azy izy. Izy dia alika kely kilalao mahazatra ankehitriny, ka sarotra ny milaza momba ny toetrany. '
'Ny zanakay lahy Pepper dia Cavestie be fitiavana izay manao toy ny saka. Tiany ny mandeha mitaingin-tsoavaly ary hitsambikina ao anaty fiara ianao raha tonga eo an-tranonay mitsidika anao. Manana palitao tsara tarehy, malefaka, landy ary boribory izy ary tena tia olona alika , saka , ary ny olona. '
Pepper ny Cavestie boribory amin'ny 5 taona
Voahazy toy ny alika kely ny Cavestie boribory
lanja antonony ho an'ny spaniel akoho
alika kanana mainty sy fotsy
mena miloko fotsy sy fotsy
yorkie terrier mifangaro amin'ny chihuahua
laboratoara mavo sy mix mix basset